Nageenya Itoophiyaaf, tattaaffii Gamtaa Awurooppaa
Itoophiyaa keessatti rakkooleen nagaafi tasgabbii mudachaa jiran yeroo yerootti bifasaanii jijjiirrachuun lubbuu lammiilee gaaga’uurra darbuun adeemsa jireenya hawaasaarratti dhiibbaa geessisaa jira. Kunimmoo haalaan yaaddessaa ta’uusaarraa kan ka’e dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ta’eera.
Mootummaan gamanumaan rakkoo kana to’achuuf sosochii barbaachisaafi murteessaa ta’an taasisuurratti kan argamu ta’uusaa hubatmaadha.
Gamtaan Awurooppaas dhimmoota nageenyaafi misoomarratti maree tibbana magaalaa Finfinneetti qaamota mootummaa dhimmisaa ilaallatu waliin taasiseen xiyyeeffannoofi eeggannoo guddaan hojjetamuu akka qabu ibseera.
Kanaanis jilli gamtichaa, nageenyi bu’uura waan maraa ta’uusaa eeruun misooma hawaas-dinagdeefi siyaasa biyyattii caalaatti kan miidhu waan ta’eef, hunduu dhimmamuun hojjechuu akka qabu yaadachiiseera.
Ittaanaan Daariktera Dhimma Alaa Gamtaa Awurooppaa Mistar Kiristaan Liifilar gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin, Itoophiyaan nageenya biyyoota Afrikaa mirkaneessuuf akkuma tumsaa turte nageenya kutaalee biyyattii maraa mirkaneessuuf antummaafi iftoominaan hojjechuu akka qabdu himanii, garaagarummaa jiru maraas siyaasa bilchina qabuun furuun barbaachisaa ta’uu hubachiisu.
Siyaasni tasgabbiifi bilchina qabu biyya keessaa dhibuun gaaga’ama guddaa qaqqabsiisa kan jedhan Mistar Kiristaan, misooma hawaasummaafi dinagdee biyyattiin galmeessisaa jirturratti dhiibbaa guddaa waan geessisuuf hatattamaan furamuu qabaa jedhu.
Itoophiyaafi Gamtaan Awurooppaa kanaan dura hojiilee misoomaa addaddaarratti waliin ta’uun hojjetaa kan jiran yoo ta’u, rakkoo nageenyaa uumamaa jiru furuu keessattis antummaa lammiileef qaban gama deggarsa barbaachisaa ta’an kennuun kan hojjetan ta’uu eeru.
Itoophiyaafi Gamtaan Awurooppaa nageenya biyyoota Afrikaa Bahaa qabatamaan mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa taphachaa kan turan yoo ta’u, har’as miira kutannoon waliin kan hojjetan ta’uu ammoo kan dubbatan, Itoophiyaatti Daariktara waliigalaa Dhimmoota Awurooppaa Obbo Tasfaayee Yilmaati.
Gamtichi durumaa kaasee Itoophiyaa waliin hidhata uumuun hojjechaa akka tureefi jiru himanii, dhimmoota godaansa seeraan alaa ittisuurratti waliin hojjechuuf waliigalteefi kutannoon jiru olaanaa ta’uu ibsu.
Lammiileen biyyoota addaddaa godaanuun gara Itoophiyaa seenanis kenniinsa tajaajilaa haala gaariin argachuu akka danda’aniif, gamtichi deggaraa jiraa kan jedhani daariktarichi, hanqinoota jiran maraa fooyyessuufis qindoominaan hojjechuuf waliigalameera. Kana waliinis rakkoolee nageenyaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mudachaa jiran furuu keessattis sosochii Itoophiyaan taasisaa jirtu jajjabeessaa waan ta’eef, galateeffamuu qabaa jedhu.
Nagaafi tasgabbiin biyyattii bakka hinjirretti waa’ee misoomaafi dimokiraasii dubbachuu miti bahanii galuun ulfaataadha kan jedhan daarikatarichi, dhimma wayitawaa Itoophiyaan keessa jirtu furuuf yeroo kamirrayyuu caalaa hojjetaa akka jiran hubachiisu.
Keessumattuu rifoormii jalqabame qabatamaan dhugoomsuu, akkasumas dhimma nageenyaarratti waliin hojjechuuf kaka’umsiifi kutannoon jiru cimuu akka qabu waliigalame yoo ta’u, kallattiii kanaan of kennanii hojjechuun barbaachisaafi kan yeroo fudhachuu hinqabnedha, jedhu.
Walumaagalatti misooma hawaasumaa, dinagdeefi siyaasa mijataafi hirmaachisaa ta’e qabatamaan mirkaneessuun imala haaromsaa Itoophiyaan eegalte milkeessuu keessatti shoora olaanaa kan taphatuudha. Rakkooleen nageenyaa mudatan guddina galmaa’aa jiran akka hingufachiisneef hojjechuun murteessaadha. Gamtaan Awurooppaas fiixa bahumsa kanaaf deggarsa gochaa kan tureefi ammas taasisaa jiru waan ta’eef kan dinqisiifatamuu qabuudha; mootummaan biyyattiis xiyyeeffannoon waliin hojjechuu barbaachisa.
Torban kana/This_Week 11156
Torban darbe/This_Month 97513
Guyyaa mara/All_Days 1435936